How was the meeting? by Daw Tin Nwai Win - Myanmar Network
How was the meeting? by Daw Tin Nwai Win
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on November 21, 2014 at 15:38 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခုခေတ်အခါတွင် အစည်းအဝေးများကို အလုပ်ကိစ္စဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရပ်ရေးရွာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ၊ အခြားသော အကြောင်းအရာများကြောင့်ဖြစ်စေ မလွဲမသွေ တက်ရောက်ကြရစမြဲဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြရာတွင် မည်သို့ ဆောင်ရွက်သွားမှသာလျှင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် အစည်းအဝေးပွဲဖြစ်ပြီး၊ တခါတရံတွင် အချိန်ကုန် အကျိုးမဲ့ဖြစ်တတ်ပုံကို အောက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦး ဆွေးနွေးကြပုံကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ဆန်းစစ်ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
Meeting discussion ကို ဖတ်ရှုပြီး "good things to follow" နှင့် "bad things to avoid atameeting" ဟူ၍ ကဏ္ဍနှစ်ပိုင်း ခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အောက်ပါစကားပြော စာပိုဒ်ကို အရင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
Barbara: I agree with Anil. I felt we had some very useful discussions, and that we reached an agreement that was good for both sides. We certainly coveredalot of ground. It was incredible the number of things we got through.
Juliet: But there were too many digressions. John was rambling and kept wandering off the point. He just uses meetings asachance to show off. Just likealot of men: he just wanted to show how powerful he is and whatagood talker he is.
Anil: But to be fair, the chair really kept things moving: she encouraged people to be brief and to stick to the point and we achievedalot inashort time. Anyway, I learnedalot and I think they listened to what we had to say.
"Good things to follow" ကို ရှေးဦးစွာ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်။
Anil ၏ discussion ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် "I though it was very productive." ဟုဆိုရာ၌ အစည်းအဝေးကို အကျိုးရှိကြောင်းဖြင့် တင်ပြပါသည်။ Anil ၏ "productive" ဟူသော အချက်ကို Barbara က ထောက်ခံပုံမှာ "I felt we had some very useful discussions." ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ Useful discussions ဖြစ်ပုံကိုလည်း ဆက်လက်ရှင်းပြရာတွင် "we reached an agreement that was good for both sides." ဟူ၍ စည်းဝေးပွဲတစ်ခုတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီမှုရရှိပါက အစည်းအဝေးပွဲကောင်းတစ်ခု၏ characteristic အဂါင်္ရပ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပုံမှာ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းပါသည်။
"We certainly coveredalot of ground." ဟူသည့် အချက်မှာ အစည်းအဝေးတွင် အကြောင်းအရာ အချက်အလက် မြောက်များစွာ ခြုံငုံဆွေးနွေးနိုင်ပါမှ အစည်းအဝေးကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
"It was incredible the number of things we get through" ဟူသော ဝါကျသည် "We certainly coveredalot of ground." ကို support လုပ်သည့်အနေဖြင့် အချက်အလက် မြောက်များစွာကို ခြုံငုံမိအောင် ဆွေးနွေးနိုင်ပုံမှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။
Anil က စည်းဝေးပွဲတစ်ခု၏ ကောင်းသော အချက်များကို ထောက်ပြရာ၌ "The chair really kept things moving." ဟူ၍ chairperson ၏ လိမ္မာကျွမ်းကျင်ပါးနပ်ပုံကို အချက်အလက် တစ်ခုတည်း၌ ကျောက်ချ၍ ကြာရှည်နှောင့်နှေးမှု မရှိစေရန် အချက်အလက်များ တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ရွေ့လျားရွှေ့ပြောင်းနေစေရန် "she encouraged people to be brief and to stick to the point." ဟူ၍ အစည်းအဝေးတွင် စကားပြောဆိုသူများကို လိုရင်းတိုရှင်းပြောကြားစေရန် တိုက်တွန်းအားပေးပြီး အကြောင်းအရာများကို ထွေရာလေးပါးလိုက်လံပြောဆိုနေခြင်းဖြင့် မူလ ပြောဆိုလိုသော လိုရင်းအချက် မပျောက်သွားအောင် ထိန်းကြောင်းပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် "we reachedalot inashort time." အချိန်အတို အတွင်း လိုရာ အချက်အလက်မြောက်များစွာကို ပေါက်မြောက်အောင်မြင်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း၊ "I learnedalot." အစည်းအဝေး တစ်ခုမှ မှတ်သားနာယူနိုင်သော အချက်အလက်များစွာ ရရှိနိုင်ပါက စည်းဝေးပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။
နောက်ဆုံး ကောင်းချက် တစ်ခုအနေဖြင့် Anil တင်ပြပုံမှာ "... they listened to what we had to say." ဟူ၍ စည်းဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်သူများ၏ တင်ပြချက်များကို နားထောင်ပေးခြင်းသည်လည်း အစည်းအဝေးတစ်ခု၏ အဂါင်္ရပ်အကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
"Bad things to avoid" အနေဖြင့် Juliet ၏ ဆွေးနွေးချက်များအရ သိရှိနိုင်ပါသည်။ "I thought it wasacomplete waste of time." အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရခြင်းဖြင့် အချိန်ဖြုန်းတီးကုန်ဆုံးရသည်ဟု ယူဆပါက ထိုအစည်းအဝေးမျိုးကို အဆိုးဘက်မှ ရှုမြင်သုံးသပ်ရပါသည်။
အချိန်ကုန်သည်ဟု ယူဆရခြင်းအကြောင်းမှာ "I didn't hear anything I didn’t already know." ဆွေးနွေးသော မည်သည့်အချက်များမှာ အကြောင်းအရာအသစ်များ မဟုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။။ (ဤအချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်မှတ်သားနာယူလိုက်နာဖွယ်ကောင်းသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။)
"There were too many digressions." မူလ အကြောင်းအရာမှ ဘေးချော်ထွက်မှုများရှိပုံကို "John was rambling and wandering off the point." ဟူ၍ ဖော်ပြပါသည်။ John ၏ ဇာတ်လိုက်ကျော်လုပ်တတ်ပုံကိုလည်း "He just uses meetings asachance to show off." ဟူ၍၎င်း "he just wanted to show how powerful he is and whatagood talker he is." စသည်ဖြင့် အစည်းအဝေးများတွင် John ကဲ့သို့သော လူစားများကြောင့် အစည်းအဝေးသို့ ကြွရောက်လာသော အခြားလူများ၏ အဖိုးတန်အချိန်များ ကုန်ဆုံးရပုံကို အရေးတယူ မှတ်သားသင့်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန် အချက်များကို သိရှိနားလည်ထားခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်မြန်ဆန်၍ အချက်အလက်မြောက်များစွာကို အချိန်တိုကာလအတွင်း ပေါက်မြောက်အောင်မြင်စွာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြုလုပ်နိုင်မည့် အကျိုးများစေမည့် အစည်းအဝေးများကို ကျင်းပဆောင်ရွက်နိုင်သော နိုင်ငံသားကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။
Reference: Business Vocabulary in Use (Pg. 116)
အသုံးဝင်သော စကားအသုံးအနှုန်းများ (Breath/Know/Like/Roll/Same)
Conversation lesson (Entertainingavisitor - ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံခြင်း)